बालबालिकाले मास्क किन लगाउने ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
बालबालिकाले मास्क किन लगाउने ?
कुन उमेर समूहकाले कसरी मास्क लगाउने ?
उनीहरूले कम्तीमा ४०-६० सेकेण्डसम्म बारम्बार साबुन र पानीले वा २०— ३० सेकेन्डसम्म अल्कोहल भएको सामग्रीको प्रयोग गरी हात धुने् ।
मास्कलाई रमाइलो बनाउनुहोस्। एउटा मास्क वा कपडा छान्ने कामलाई रमाइलो बनाउने प्रयास गर्नुहोस् र तपाईंको बालबालिकालाई यो रमाइलोमा सकेसम्म संलग्न गराउनुहोस्। याद गर्नुहोस्, तपाईंका बालबालिकाले उनीहरूको मास्कको रूप र डिजाइन जति मन पराउँछन्, तपाईं वरिपरि नहुँदा पनि उनीहरूले माक्स लगाउने सम्भावना त्यति बढी हुन्छ। -युनिसेफ
धरान-१ का ४५ वर्षीय संक्रमित पुरुषको आज मृत्यु
धरानमा बिहीबार नै अर्का संक्रमितको मृत्यु